Yaraanta Samsun ma tegi doonto OMU | RayHaber | raillynews
HometareenkaSamsun, basaska yar yar ma tagi doonaan OMU
Samsun, basaska yar yar ma tagi doonaan OMU
15 / 09 / 2017 tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY, taraamka
Ku-simaha Guddoomiyaha Degmada Samsun Turan Cakir, oo ah wakiilka OMU-Metropolitan ee u dhexeeya minibuses ee ka shaqeynaya jaamacadda ayaa laga saari doonaa taraamka, ayuu yiri.
Kulanka Golaha Wakiillada ee Samsun, ayaa ka dhacay magaalada Golaha Wakiilada ee Metropolitan. Qeybta 67 ee tirakoobka ayaa loo gudbiyay guddiyada ka tirsan baarlamaanka. Guddiga, 3 ayaa la diiday, waxaana 2 aqbaley cod aqlabiyad ah waxaana loo gudbiyay baarlamaanka. Guud ahaan, 64 ayaa lagu soo rogay iyada oo loo marayo guddiyada khuseeya baarlamaanka si loogu ansixiyo.
MAXAY DHIBAATOOYINKA WAXYAABAHA LAGA HELAYAA?
Guddiyadu waxay sidoo kale ka wadahadleen arrimo ay ku ballaarinayaan nidaamka tareenka fudud ee ku yaalla xerada Jaamacadda Ondogar ee Jaamacadda Ondoguzi (OMU). Xubinta Golaha MHP Mujahid Satellite ayaa ka jawaabtay xaqiiqda ah in adeega yar ee OMU uusan ku sii ahaan doonin xerada ka dib markii taraamka loo adeegay. Satellite, protocol Protolol Maxay noqonaysaa xaaladda basaska yar ee ka shaqeeya dhismaha jaamacadda ee nidaamka. maareynta jaamacadda dhab ahaantii maya maya. Sidaa daraadeed basaska yar-yar ayaa gabi ahaanba kici doona. Dhibaatada miyaa la xalin doonaa? Milkiilayaashu waxay lacag siiyeen degmada waxayna heleen taargooyinkooda liisan, oo ay bixiyaan canshuurtooda, maxay noqon doonaan xaaladdooda? Kul wuxuu yiri.
Turan Cakir, Ku-xigeenka Duqa Magaalada Samsun, ayaa sheegay in maamulka OMU uu sidoo kale ku yaal agagaarka degmada Metropolitan ee ku saabsan maqnaanshaha xarumaha dolmarka ee gudaha dhismaha; MUS Ma jiri doonto wax laga buuxo dhismaha jaamacadda. Waxaan durbadiiba ka wada hadalnay arimaha khadka ka hor kulankan ama goobaha kala duwan. Bixinta qiimaha xawaaraha waa ganacsi qiyaastii, sicirka wuu kici karaa oo dhici karaa. Sidaa darteed, kuwa sameeya ganacsigaan waa la diyaarin doonaa. Waxay isticmaaleen rakaabkii yaraa ee la soo dhaafay, hadda waxay qaadaan wax badan, laga yaabee inay mustaqbalka wax yar ka qaadan doonaan. Waxaa jiri doona meelo mar mar looga isticmaalo waddooyinkooda ".
Isha: www.habergazetesi.com.t waa
Tram laga soo bilaabo OMU ilaa Tekkeköy ee Samsun ... Halkan waa taariikhda furitaanka ee khadka cusub
OMU-Garoonka diyaaradaha ee Samsun
Goorma ayuu Tram Tram ku imanayaa OMU ee Samsun?
Samsun Line Tareenka Tareenka wuxuu udambeeyay Xarunta OMU
Samsun's Tram to OMU bishii July
Abaalmarinta mashruuca Samsun Logistics Logistics
TÜVASAŞ Xildhibaanadii hore